- Hello. Waxaan furanahay.
Qalabka Lüks Castle Hire, Media City UK, Manchester, M50 2EQ
Furan 24 / 7. (24 khadka saacadaha saacadaha)
Ku jir qolka Qolka Qolka
Kireyso Kalaweelo Dhamaan
Nolosha Live Sida Boqorka
Tallaabada Gudaha Gidaarrada Our Castle Castle Hotels si aad u noqoto qayb ka mid ah Daahfurka a.
Kirada gala arooskaaga!
Samee munaasabadaada gaarka ah si aad u xasuusto!
Qolalka hantida leh ee ku yaal taariikhda ayaa ah waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso fasax gaar ah.
Iska dhig dharka boqoradda
Mid kasta oo ka mid ah qalcaddaheena waa mid ka mid ah caqliga, raaxada iyo weynaanta.
Xiiseyneyso: Xulo Nooca Hantida Castle Hotels ee Scotland - oo bixinaya Nabad iyo Nabadayn aan la Xumayn Goobaha Wedding Castle - Goob Joogto ah oo aan ku sheego Waxaan qabaa Dharka Damaashaadka Christmas Ku raaxeyso Sublimity-Acquaint with Castle Finest Castle ee Ireland Kirada Villa Kireyso Kalaweelo Dhamaan Hire An Island Malabka Nolosha Nolol - Savor Taariikhda Qabyaalada ah Sanad cusub Xisbiga Kirada A Castle ee UK si aad u sameysid Mudanayaasha Qadarka ah ee la xusuusnaado Self-Catering Ku jir qolka Qolka Qolka Villa Aroos
Dooro waddan halkan ...
... iyo lambarka waddan ee la soo xulay ayaa la cusbooneysiin doonaa halkan
Qalabka Lüks Castle - Xageebaa Riyadaadu noqotaa wax xaqiiq ah!
Maxaad ku fahmeysaa raaxo? U fasaxida usbuuc dhammaadka lammaanahaaga qolka qowlka ama kireysiga oo idil si loogu dabaaldego maalintaada ama dhacdadaada gaarka ah? Wax kasta oo aad u baahan tahay - waxaad ka heli doontaa raaxo badan oo badan oo leh Luxury Castle Kireysan.
Fasaxyada Qoyska Iskujira
Ku raaxeyso raaxada ee qalcadda aad jeceshahay, sameyso daqiiqado aan la iloobi karin oo saaxiibbadaada iyo qoyskaaga oo aad xusuusnaato xusuusta sanadaha soo socda!
Fiiri faahfaahinta Estates Castle
Shan Koob Ah Laba Sarreysa
Haddii aad raadineyso isku-dheelitirnaan wanaagsan oo ah adeegyo aan fiicnayn, suurtagelinta suuban iyo dareen gaar ah oo taariikhda ah - waxaad timid meeshii saxda ahayd!
Kalabaxda ee Ireland
Ku noolow sida royalty ah oo ku raaxaysta hareeraha hareeraheeda iyo taariikhi ah ee ku haboon ee hoygayaga quruxda badan ee jasiiradaha gaarka loo leeyahay!
Hayso Shirkadda Royal Castle Wedding
Riyada ah inaad haysato aroos quruxsan, riwaayad qurxoon oo qalin jaban oo hareeraysan haybad, taariikh iyo raaxo? Waxay u egtahay boqor iyo boqorad ay la wadaagaan qurxinta quruxda badan ee raaxada raaxada ah!
Intimate Castle Wedding For Two Dhamaan Dharka Dharka
Ma rabtaa in aad fasax nasasho fasax ah ku qaadato qalcada quruxda badan ee dabiiciga ah ee Scotland ugu quruxda badan oo aad u sarreeya dabiiciga iyo fauna? Guryahayaga qalabka ayaa ah wax walba oo aad u baahan tahay!
Sannadka Cusub ee Cusub
Maxaa Us Qeexaa reebo?
Waxaanu bixinaa waayo-aragnimo dhab ah oo ku saabsan aqoonta iyo khibradaheena, waxaanan kaa caawin karnaa sidii aad u habayn lahayd faahfaahin kasta - ha ahaato mid yar ama weyn - oo ku habee sida waafaqsan shuruudahaaga.
Khabiiradayadu waxay dhageystaan ​​shuruudahaaga marka hore kadibna waxay bixiyaan fikrado dhexdhexaad ah oo daacad ah
Maaddaama khabiiradayadu ay soo booqdaan dhamaan qalcadaha aynu ku dhexjirno, waxay leeyihiin aqoon iyo qoto dheer oo ku saabsan mid kasta iyo qalab kasta
Annaga naga mid ah, waxaad aragtaa waa waxa aad bixiso. Ma jiraan wax qarsoon oo qarsoon
Khabiiro kuheelan Qalin
Ma waxaad raadineysaa qalab qurxoon oo ku yaal UK iyo Ireland? At Castle Luxury Hire, waxaad ka heli doontaa ururinta lakabka ah ee qalab gaar ah oo loogu talagalay kirada iyadoo loo eegayo miisaaniyaddaada iyo shuruudahaaga. Waxaan wadaagnaa qaar ka mid ah qalabka ugu fiican iyo qalaad si aad u sameyso xigaada ku xigta ee fasax aad u weyn!
WAXAA LAGU QAATAY
Qalabyadeenu waa qaar ka mid ah tusaalooyinka ugu fiican dunida ee naqshadaynta naqshadaynta naqshadaynta. Inta badan guryahaas, oo ay ku nool yihiin sharafka, ayaa lagu tiriyaa taariikhda. Waxaan ku qalabeynay qalab casri ah si ay kuu keenaan waayo-aragnimo dhab ah. Qalabkani wuxuu ku faanaa dhismo qurux badan, qurxinta beerta, duuduubka gudaha iyo quruxda badan ee qiimaha leh. La soco hoygaaga riyadeenta ee nala soo ururinta qaaska ah ee raaxeysiga muuqaalka leh!
Castle of Mingary
Waa maxay noo Macaamiisha ayaa leh
"Waxaan aaminsanahay in macaamilka qanacsan uu yahay istaraatijiyad ganacsi ee ugu fiican. Talooyinkayaga ugu fiican ayaa ah dhibcaheenna macaamiisha farxad leh kuwaas oo ka faa'iideystay adeegyadayada aan haboonayn. Ha u qaadin ereygeena. Akhri waxa ay macaamiishu noogu leeyihiin inoo sheegaan ... "
Waxaanu soo dajinnay joogitaankayaga qol jiifo leh Kireyste Luxury Hire. Waa in la yidhaahdo - adeeggoodu waa cajiib, ma codsan karo wax dheeraad ah.
Waxaan raadineynay hoolka raaxada leh si aan u martigelino xafladda dhalashadeeda dhalashadeeda ka dibna waxaan ku soo qaadnay naadiga Luxury Castle Hire - kooxda ayaa suurtogelisay. Waxaan bakhtiinnay Inglethorpe Hall ee Norfolk, waanan ku faraxsanahay.
Adeeg fiican oo ay bixiso kooxda Luxury Castle Hire. Waxaan qorshaynaynaa fasaxeena labaad. Qaado adeegooda oo aadan qoomameyn.
Koox ka mid ah Luxury Castle Hire waxay noo soo bandhigeen adeegyo khaas ah oo ku habboon miisaaniyadeenna waxaana loo baahan yahay si fiican. Khibrad aad u wanaagsan.
Waxaan ku jirnay qol jiif oo qalab ah oo ku haboonayd naga dhigtay xNUMX habeenkii. Munaasabadu waxay ahayd mid cajiib ah, waxaana ku riyaaqnay aragti dheer ee beeraha qurxinta quruxda badan. Ma sugi karno booqashadayada xigta. Waad mahadsantihiin qalabka dhismaha ee Luxury Castle.
Waxaan leenahay waayo-aragnimada ugu fiican ee cajiibka ah intii aan joogno guriga Puggiestone. Waad mahadsantihiin qalabka dhismaha ee Luxury Castle. U fiirso inaad qorsheyso fasaxyo dheeraad ah oo aad la leedahay khabiirkaaga iyo kooxda aad caawimayso.
Waxaan kuqornay qalabka dhismaha ee "Luxury Castle Hire" ee fasaxa usbuuc dhammaadka ah waxaanan aad ugu faraxsanahay waayo-aragnimada. Isku-dhafan oo wanaagsan oo ah adeeg weyn iyo xirfad-yaqaannimo. Iyo waxa ugu fiicnaa ee iyaga ku saabsan waa in ay leeyihiin wax wax miisaaniyadeed kasta.
Waxaan dooranay inaan buug ka soo qaato Castle Hire for dabaaldega qoyskeena waana ku faraxsanahay inaan sameynay. Dhamaan xubnaha qoyskeena iyo qaraabada dhow ayaa aad ugu faraxday quruxda qalcadda, hareeraheeda iyo adeegyadda gaarka ah ee aan helnay. Waad mahadsantihiin qalabka dhismaha ee Luxury Castle.
Our joogitaanka Spanish Cay Cay waa khibrad cajiib ah. Waxaan jadwal u wehelinay jasiiradda oo dhan. Qalabka waxaa lagu taliyay kooxda Luxury Castle Hire ka dib markii ay dhageysteen shuruudihii iyo xulashadayada. Waad mahadsantihiin qalabka dhismaha ee Luxury Castle.
Had iyo jeer waxaan ku riyoon jiray inaan arooska qalin iyo dareemo sida gabadha oo ah maalinta ugu badan ee noloshayda. Castle Castle Hire ayaa riyadayda ka dhigtay mid run ah. Mahadsanid!
Ma helayo waqti badan inaan la qaato qoyskeyga iyo asxaabteyda sababtoo ah jadwalkayga mashquulka ah. Iyada oo leh Castle Castle Hire, waxaan helay fursad aan ku qabsado asxaabteyda oo aan ku darsado buuraha Scottish-ka. Tani waxay ahayd mid aad u baahan. Waad ku mahadsantahay kooxda kooxda kireysiga ee Luxury.
Waxaan rabay in aan fasaxyada kirismaska ​​ku qaato qoyskeyga jasiiradda. Aniga iyo xaaskeyga - labadaba waxaan raadinay meel fiican oo ka dibna waxaan u nimid inaan ka ogaano jasiiradda Mustique ka soo galitaanka dhismaha Luxury Castle. Aad ayaan ugu faraxsanahay kooxda Qalinka Luxury Hire waxayna si aad ah ugu talin laheyd!
Waxaan raadinay meel aamusnaan leh oo hodan ah oo loogu talagalay malabkeena. Khabiirada Luxury Castle Hire waxay naga caawiyeen helitaanka hoy ku haboon. Xaaskeyga iyo wakhti fiican ayaan wada wadaagnay. Waad mahadsantihiin qalabka dhismaha ee Luxury Castle
Waxaan dooneynay aroos aad u weyn aduunka meel qariib ah. Oo taas aawadeedna waxaannu doonaynay inaannu kiraysanno shuqulkiisii ​​oo dhan. Waxaan la soo xiriirney Castle Hire Kirayste waxayna naga caawiyeen si kasta oo suurtogal ah - xaqiiqada ah xulashada qalcadda ugu fiican sida waafaqsan noo doorashadeena siinta macluumaadka saxda ah
Waxaan leenahay fasax isboorti oo qurux badan oo ku yaala Towerhouse Castle iyo Coach House-thanks to kooxda khabiirada ee Qalabka Qalabka Luxury Hire!
Waxaan baqshiinnay Malawaankeena leh Hoolka Dalalka ee Luxury Hire oo ku sugnaa Jasiiradda Calivigny. Adeegan cajiib ah bilawga ilaa dhammaadka. Waad ku mahadsan tahay wax badan.
Kooxda Xiriirka Kirismiska ee Luxury Castle ayaa aad u xanuunsanaa dhammaan su'aalaheena waxayna na siiyeen dhammaan macluumaadka aan u baahannahay. Aad baa loogu taliyey!
Goob Joogitaan Sanadka Cusub iyo Sannadka Cusub
Qalabka Lüks Castle,
Furan 24 / 7. (Adeegga Saacadaha 24)
Wac Wac Bilaash ah 0808 133 5988
Wicitaanada Caalamiga ah: + 44 (0) 113 3450420
Kireysiga Lulaska Lüks
Socdaalka Jargon Buster
Milkiilayaasha hantida / wakiilada
HALKA AAN HELI KARAA
Iibso Kalaweele Dhamaan
Kusoo Gali Kaliya Kaliya
Ku sug Kaliya Kaliya Kirismaska
Ku joog Kaliya Kaliya Sannad Cusub
Kireeyaha Qoyska Cunto-qabsashada
Xuquuqda daabacaadda © 1960 - 2018 Qalabka Lüks Castle Hire All rights reserved.
Naqshadda dhismaha iyo horumarinta LCC
Select Country AndorraUnited Arab EmiratesAfghanistanAntigua and BarbudaAnguillaAlbaniaArmeniaNetherlands ruux.dalkaAngolaJacaylkuArgentinaAmerican SamoaAustriaAustraliaArubaÅlandAzerbaijanBosnia iyo HerzegovinaBarbadosBangladeshBelgiumBurkina FasoBulgariaBahrainBurundiBeninSaint BarthélemyBermudaBrunei DarussalamBoliviaBrazilBahamasBhutanBouvet IslandBotswanaBelarusBelizeCanadaCocos (rukuucda) IslandsCongo (Kinshasa)Central African RepublicCongo (Brazzaville)SwitzerlandIvory CoastCook IslandsChileCameroonShiinahaColombiaCosta RicaCubaCape VerdeChristmas IslandCyprusCzech RepublicGermanyJabuutiDenmarkDominikaDominican RepublicAlgeriaEcuadorEstoniaMasarWestern SaharaEritreaSpainItoobiyaFinlandFijiFalkland IslandsMicronesiaFaroe IslandsFranceGabonBoqortooyada IngiriiskaGrenadaGeorgiaFrench GuianaGuernseyGhanaGibraltarGreenlandGambiaGuineaGuadeloupeEquatorial GuineaGreeceSouth Georgia iyo South Sandwich IslandsGuatemalaGuamGuinea-BissauGuyanaHong KongHeard iyo McDonald IslandsHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIrelandIsraa'iilIsle of ManHindiyaTerritory British Indian OceanCiraaqIiraanIcelandItalyJerseyJamaicaUrdunJapanKenyaKyrgyzstanCambodiaKiribatiComorosSaint Kitts and NevisKorea, NorthKorea, SouthKuwaitCayman IslandsKazakhstanLaosLubnaanSaint LuciaLiechtensteinSri LankaLiberiaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaLiibiyaMoroccoMonacoMoldovaMontenegroSaint Martin (qayb Faransiis)MadagascarIslands MarshallMacedoniaMaliMyanmarMongoliaMacauNorthern Mariana IslandsMartiniqueMauritaniaMontserratMaltaMauritiusMaldivesMalawiMexicoMalaysiaMozambiqueNamibiaNew CaledoniaNigerNorfolk IslandNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNauruNiueNew ZealandCumaanPanamaPeruFaransiis PolynesiaPapua New GuineaFilibiinPakistanPolandSaint Pierre iyo MiquelonPitcairnPuerto RicoPalestinePortugalPalauParaguayQadarReunionRomaniaSerbiaRussian FederationRwandaSaudi ArabiaJasiiradaha SolomonSeychellesSudanIswidhanSingaporeSaint HelenaSloveniaSvalbard iyo Jan Mayen IslandsSlovakiaSierra LeoneSan MarinoSenegalSoomaaliyaSurinameSao Tomé iyo PrincipeEl SalvadorSuuriyaSwazilandTurkiga oo Caicos IslandsChadMeelo Faransiis ahTogoThailandTajikistanTokelauTimor Leste-TurkmenistanTunisiaTongaTurkeyTrinidad and TobagoTuvaluTaiwanTansaaniyaUkraineUgandaUnited States Islands furid MinorUnited States of AmericaUruguayUzbekistanVatican CitySaint Vincent iyo Grenadines ahVenezuelaVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USVietnamVanuatuWallis iyo Futuna IslandsSamoaYemenMayotteKoonfur AfrikaZambiaZimbabwe
Saacadda 123456789101112 Min 51015202530354045505560 PM AM